Blogger of this week: Kishor Sharma - MeroReport
Blogger of this week: Kishor Sharma
मेरोरिपोर्टमा ब्लगरहरुको येगदानलाइ कदर गर्ने क्रममा यो पटक फोटोब्लगर किशोर शर्मा साताको ब्लगर बन्न सफल हुनुभएको छ । आमसञ्चार र पत्रकारितामा स्नातकोत्तर फोटो पत्रकार शर्मालाई सामाजिक बिषयहरुमा बिशेष रुची छ । उनले ड्रीक ईन्डिया, कल्कत्तामा नर्वेजियन पीस कोरको सहभागी भएर २००९ मा फोटोग्राफिसम्बन्धी १० महिना काम पनि गरेका थिए । उनको फोटोब्लग एकदमै लोकप्रिय पनि छ: सन् २०११ मा मात्रै उनको ब्लग ११ हजारभन्दा बढीपटक हेरिएको छ।उनले थुप्रै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय फोटोग्राफी कार्यशालामा भाग लिएका छन । उनलाई भर्खरै मात्र डेनमार्कको आर्हुसमा रहेको डेनिश स्कुल अफ मिडिया एन्ड जर्नलिज्ममा फोटो सर्कलले आयोजना गरेको ट्रेनर्स ट्रेनिङमा पनि सहभागी हुन निम्तो आएको छ । हाल उनी फोटो सर्कल (www.photocircle.com.np) मा कार्यरत छन ।उनीसँग ब्लगिङ्को वरिपरि रहेर गरिएको छोटो कुराकानी तल प्रस्तुत गरिएको छ:
तपाईं कसरी ब्लगिङमा आकर्षित हुनुभयो ?
मैले २००९ जनवरीदेखी ब्लगिङ गर्न थालेको हुँ । मैले फोटो ब्लग को रुपमा आफ्नो ब्लगिङ करियर सुरु गरेँ । मैले ब्लगिङ सुरु गर्दा कलकत्ताको सडकको दिनहुँ जीवनको बारेमा श्यामस्वेत फोटोहरु पोस्ट गर्न थालेँ । मैले कहिल्यै व्यवसायिक रुपमा ब्लगिङ गर्छु भन्ने सोचिन । मैले यसलाई आफ्नो व्यक्तिगत फोटोहरुको डाइरी को रुप मा प्रयोग गर्न थालेँ र अहिलेसम्म पनि यथावत नै छ ।
म फोटो ब्लगर हुँ , र फोटो ब्लगिङ गर्छु ।
मलाई ब्लगिङ गर्न एकदमै मन लाग्छ । आफ्नो फोटो पोस्ट गर्न ब्लग एक्दमै महत्वपुर्ण प्ल्याटफर्म लाग्छ । यो आफुलाई व्यक्तिगत रुपमा व्यक्त गर्ने सशक्त माध्यम हो ।
ब्लगिङमा कत्तिको समय दिनुहुन्छ ?
मैले ब्लगिङ गर्ने निश्चित समय छैन । म अरु काममा व्यस्त भएकोले अहिले यो कम हुँदै गइरहेको छ । तर म केहि फोटो खिच्ने बित्तिकै आफ्नो ब्लगमा पोस्ट गर्छु ताकि मेरो साथीहरुले हेर्न सकुन् ।
हाम्रो वरिपरि हुने कुराहरु जुन हामीले याद गरेका हुँदैनौ । त्यस्तो बिषयबस्तुलाई कवितात्मक रुपमा फोटो खिचेर आफ्नो ब्लगमा पोस्ट गर्ने गर्दछु । म अर्को ब्लग पनि चलाउछुँ http://drisheek.wordpress.com जहाँ म बिभिन्न फोटोहरु पोस्ट गर्दछु ।
नेपाली ब्लगर्सले निक्कै राम्रो गरीरहेका छन । मेरा धेरै साथीहरुलाई मैले ब्लगको माध्यमबाट नै चिनेको हुँ । तर मलाई मानिसहरुले ब्लगमा राजनैतिक पुर्वाग्रह र विवाद गरेको मन पर्दैन । यसमा
ब्लगरको अनुमती नलिएर, उनीहरुको नाम उल्लेख नगरी लेख रचना, फोटो, भिडियोहरु चोरी गरेको मन पर्दैन ।
तपाईंको ब्लगको ट्राफिक कस्तो छ र ब्लगमा पाठकहरुबाट कस्तो प्रतिकिया पाईरहनु भएको छ ?
मेरो ब्लग अहिले सम्म २४,००० चोटी हेरिएको छ । अहिले मैले निकै थोरै फोटो पोस्ट गरे पनि दिनहुँ जसो २० देखी ३० भिजिटर हुने गर्दछन् । बिषेशगरी मैले नयाँ फोटो पोस्ट गर्ने बित्तिकै १५० भिजिटरसम्म पुग्ने गर्दछ । गुगलबाट, मेरो साथीहरुको लिन्कबाट, र सोसिअल नेटवोर्किङ साइटबाट मैले भिजिटर पाउने गर्दछु । मैले कुनै फोटो पोस्ट गर्ने बित्तिकै मेरो साथीहरुले हेर्ने र कमेन्ट गर्ने गर्दछन ।
तपाईसँग ब्लगिङ गर्दाको कुनै त्यस्तो कुनै रमाइलो वा सम्झनलायक अनुभव छ ?
अँ, केहि त्यस्तो रमाइलो अनुभवहरु छन । मैले ब्लगिङ गर्दा धेरै साथी बनाएँ र अझ महत्वपुर्ण कुरा मैले मेरो एकदमै मिल्ने र राम्रो साथी पनि ब्लगबाट नै पाएँ । आफ्नो ब्लग पोस्ट प्रवर्धन गर्न विश्वको बिभिन्न ठाउँ मानिसहरुले मेरो फोटो प्रयोग गर्न अनुमती माग्दा मलाई अचम्म लाग्छ ।
हामीकहाँ केही युवा ब्लगरहरूले ब्लगिङ्लाइ ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन आचारसंहिता पनि बनाएका छन्, तपाइलाइ के लाग्छ, ब्लगिङमा आचारसंहिताको जरुरी छ?
ब्लगिङले आफ्नो स्थानलाई संचारको शाक्तिशाली माध्यमको रुपमा प्रयोग गरिरहेको कुरामा कुनै दुइ मत छैन । मुलधारको मिडिया होस् वा ब्यक्तिगत ब्लग, नैतिकता भन्ने कुरा जहाँपनी आवश्यक छ, तर यो पनि हामी बस्ने समाजमा भरपर्छ । मेरो लागि नैतिकता भन्ने कुरा एउटा ब्यक्तीको बुझाइको स्तरमा भर पर्छ । ब्लग भनेको ब्यक्तिगत धारणा साटासाट गर्ने माध्यम भएको हुनाले यसमा कुनै नियम राख्नु हुँदैन, त्यही पनि हामी आफैंले निश्चित निर्देशिका पालना गर्नुपर्छ ।
नेपालमा नागरिक पत्रकारिता प्रवर्धन गर्न सामाजिक संजालका रूपमा मेरोरिपोर्ट meroreport.net सुरू भएको छ। मेरोरिपोर्टको बारेमा तपाईंको के धारणा छ ?
म पनि मेरोरिपोर्टको एउटा सदस्य हूँ र म यसको शुभारम्भ कार्यक्रममा पनि सहभागी भएको थिएँ । दुर्भाग्य, मैले अहिलेसम्म यसमा केहि योगदान गर्न सकेको छैन ।
मेरोरिपोर्टलाइ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ ?
मेरोरिपोर्टले विभिन्न क्षेत्रका ब्लगरहरुलाई एउटै थलोमा ल्याएर आफ्नो विचार, सूचना र सृजना साटासाट गर्न धेरै योगदान पुराएको छ । म मेरोरिपोर्टमा भविष्यमा पक्कै कुनै योगदान गर्नेछु भन्दै यसको अझै सफलताको लागि कामना गर्दछु ।
तपाईंको ब्लग लिन्क :
मेरोरिपोर्टमा हालसम्म फिचर हुन सफल साताका ब्लगरहरुबारे पढ्न यहाँ क्लिक गर्नुस् ।
Comment by Aakar Anil on January 6, 2012 at 12:16pm
Comment by Jiwan Kshetry on January 5, 2012 at 4:03pm
Viewed your photo blog. Wonderful!
Comment by Kranti Darai on January 5, 2012 at 3:43pm
Comment by Ajeeta Sigdel on January 5, 2012 at 12:30pm
Comment by Indra Dhoj Kshetri on January 5, 2012 at 12:27pm
Congratulations Kishorji. You are indeed doing very well in photo blogging.